January 17, 2021 - Padaethar
မှဲ့တည်နေရာနှင့် အဟောတွေပါ လူတိုင်းမှာ မှဲ့ရှိတတ်တာမို့ ကျား/မ အားလုံး (ဗဟုသုတရအောင် တင်ပေးတာပါ) ဗဟုသုတအနေနဲ့ မျှဝေတာပါ။ အမှန်ကြီးပဲလို့ မပြောနိုင်သလို၊ အမှားတွေပါလို့လဲမဆိုသာပါဘူး။ ကိုယ့်မှာ ပါတာလေးတွေနဲ့ တိုက်ကြည်ပေါ့။ ကြိုက်လျှင်ယူ၊ မကြိုက်လျှင် ပယ်လိုက်ပါ။ ယောက်ျားတို့၏ မှဲ့ တည်နေရာနှင့် အဟော…. ( ၁ ) နဖူးပြင်တည့်တည့်တွင် မှဲ့ရှိလျှင် ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်၍ အစွပ်အစွဲခံရတတ်၏။ အပူသောကများလိမ့်မည်။ မိမိတွင် ရှိသည်ထက်ပို၍ လူအများက ချမ်းသာသည်ဟု ထင်မြင်တတ်ခြင်းကြောင့် ဒုက္ခတွေ့ရတတ်ပါသည်။ ( ၂ ) ညာဘက်မျက်ခုံးမွေးပေါ်တွင်ရှိလျှင် ချမ်းသာတတ်ပါသည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာ ပြည့်စုံလိမ့်မည်။ လောကီစည်းစိမ်အဝဝကို သုံးဆောင်ခံစားရတတ်သည်။ ( ၃ ) ဘယ်ဘက်မျက်ခုံးမွေးပေါ်တွင် မှဲ့ရှိ်လျှင် အရက်သမား၊ ကြက်သမား၊ လောင်းကစားသမား ဖြစ်တတ်သည်။ … Read more
လောကမှာ အောက်တန်းအကျဆုံး ယောက်ျား ( ၄ ) မျိုးပဲရှိတယ်
လောကမှာ အောက်တန်းအကျဆုံး ယောက်ျား ( ၄ ) မျိုးပဲရှိတယ် ( ၁ ) ကိုယ်တာဝန်မယူနိုင်ပဲ သူများအပျိုစင် ဘဝကို ဖျက်စီးတတ်သော ယောက်ျား ( ၂ ) ကိုယ်နဲ့ပြတ်သွားတဲ့ မိန်းခလေး မကောင်းကြောင်းကို နောက်ရည်းစားကို အတင်းပြောတတ်သော ယောက်ျား ( ၃ ) မိန်းမတစ်ယောက်ဆီက ကပ်ဖားရပ်ဖား ချူစားတတ်သော ယောက်ျား ( ၄ ) ကိုယ်နဲ့ ပြတ်သွားပြီးကာမှ အရှုံးမရှိပါဘူးကွာလို့ပြောတဲ့ယောက်ျား အမှန်တွေပြောပြလို မကြိုက်ဘူးဆိုရင် Block သွားနိင်တယ်ဗျာ……. ဘဝ နိဒါန်း.. ….. ရွံတရ် အဲ့လိုယောကျာ်မျိုး owner Wai unicode လောကမှာ အောကျတနျးအကဆြုံး ယောကျြား ( ၄ … Read more
အရမ်းမှန်တဲ့ ( ၇ )ရက်သားသမီး အချစ်ရေး ဗေဒင်
( ၇ )ရက်သားသမီး အချစ်ရေး ဗေဒင် တနင်္ဂနွေ သားသမီး …. အရမ်းချစ်တတ်ပါတယ်။ သို့သော် နှစ်ယောက်ပြိုင်တူ ထားချင်တတ်တယ်။ သူတို့အတွေးကတော့ အချစ်ဆိုတာ တစ်ယောက်ထဲနဲ့ပြီးရမှာလား။ အချစ်ဆိုတာ ပေးလို့ကုန်သွားတဲ့ အရာမှ မဟုတ်တာနော် ….လို့ များသောအားဖြင့် ခံယူထားတတ်ကြတယ်။အခြေအနေပေးရင် တစ်ယောက်ထက်ပိုရတတ် ယူတတ်ပါတယ်။ သူများ အထင်ကြီးလေးစားအောင်ပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့နဲ့စကားပြောပြီးရင်သူတို့ ကိုအထင်ကြီးလေးစားသွားတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ အပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အမျိုးသားများဆို ဇွတ် အတင်းချစ်ရေးဆိုတတ်တယ်။အမျိုးသမီးများကျတော့ ပွင့်လင်းတယ်၊ ချစ်သူအတွက်ဘာမဆို ရင်ဆိုင်ချင်တတ်ကြပါတယ်။ ချစ်သူအတွက် မိသားစု ကိုတောင်စွန့်လွှတ် အဆက်သွယ်ဖြတ် ရဲတာ တနင်္ဂနွေသမီးတွေပါပဲ ။တနင်္ဂနွေ သမီးများကျတော့ အစွဲ အလန်းကြီးတတ်ကြပြီး ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့စန်းပွင့်မှုကြောင့် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေသားများကတော့ အရမ်းဂရုစိုက်တဲ့ စတိုင်တွေပြတတ်တယ် ။ ကွယ်သွားတာနဲ့ မေ့ရော။ … Read more